Yeroo ammaa kana hojii manaa ciccimoo sadiitu Abiyyitti kennamee jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsYeroo ammaa kana hojii manaa ciccimoo sadiitu Abiyyitti kennamee jira.
Yeroo ammaa kana hojii manaa ciccimoo sadiitu Abiyyitti kennamee jira.
1ffaa. Lafa Tigraay (Walqaayit Xagadee, Raayyaa, Humaraa fi Allamaaxaa) kan Amaarri yeroo ammaa keenya jedhee humnaan qabatee jiru gadi lakkisiisuudha. Kun ammoo salphaa miti. Warri Amaaraa amma booda dhumnee dhabamna malee Ristii keenya gadi hin lakkifnu jechaa jiru.
2ffaa. Lafa Baadimmee kan Eeritiriyaadhaan “isiniif kenninaa lola Tigraay nu waliin hirmaadhaa jedhanii waraana Eritiraa ittiin of gargaarsisan dabarsanii Eritiriyaaf kennuudha. Kunis salphaa miti. Mootummaan yeroo kan Naannoo Tigraay lafa Tigraay Eritiraaf kennuuf qophaa’aa miti.
3. Birmadummaa biyyaa kan yeroo ammaa Suudaan caphsitee lafa Itiyoophiyaa km 50 ol ta’u humnaan qabatee jirtu irraa waraanaa Suudaan kaasee birmadummaa biyyattii kabachiisuudha. Kuni ammoo haala biyyattiin amma keessa jirtuun baay’ee ulfaataadha. Suudaanis lafa qabatte kana akka gadi hin lakkifne irra daddeebitee dubbachaa jirti. Xumurri Itiyoophiyaa maal ta’a laata? Bullee ilaalla.
Egypt, Sudan and Ethiopia resume GERD negotiations on Sunday
Sobni yoo irra deddeebi’ee himame dhugaa fakkaata, Basaastonni Bilxiginnaa !!